“Ao Burundi, Mitohy Ny Fahasimbàn’ny Zon’olombelona, Tsy Maintsy Manova Tetika Isika Mba Hanairana Izao Tontolo Izao Amin’ny Zava-mitranga” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2017 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Français
Armel NIYONGERE miaraka amin'ny fanomezany alalana.
Tsy avelan'i Armel Niyongere hanelingelina ny asany ny tahotra.
Namaky sy naheno fijoroana vavolombelona maro loatra momba ny fampijaliana, famonoana tsy araka ny lalàna ary fitazonana an-keriny ao Borondi mba hampitsaharana ny tolona ho an'ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena ao amin'ny fireneny izy. Niyongere no filohan'ny ACAT (Hetsiky ny Kristiana Ho Fanafoanana ny Fampijaliana), izy ihany koa no mandrindra ny tambajotranà fikambanana ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona, ary amin'izao fotoana izao dia any an-tsesitany izy satria ao anatin'ny lisitry ny olona / fikambanana naato nanomboka tamin'ny 2015 sy ny fiandohan'ny krizy tany Borondi ny fikambanany.
Niteraka fihetsiketsehana sy fampielezankevitra izay nivadika ho fifandonana sy fikomiana mitam-piadiana ny tsy fitovian-kevitra momba ny fanapahankevitr'i Nkurunziza hanolotra ny firotsahany hofidiana fanintelony tamin'ny 2015. Namaly faty ny governemanta, nanery mpanohitra hanao sesitany ny tenany, na hangiana. Niresaka tamin'i Armel ny Global Voices mba hanazava ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona any Borondi
Global Voices (GV): Noho ny adihevitra manodidina ny filatsahan'ny filoha Pierre Nkurunziza ho fidiana fanintelony tamin'ny 2015, mampanahy ny zava-misy ao Borondi. Tsy nahitana ilay akony mpampihavana nantenaina ilay fifanarahana Arusha. Niteraka fifanandrinana politika sy akony lehibe ny fanamafisana ny fitondrana : fahafatesan'olona an-jatony ary fara fahakeliny olona 200 000 no nandositra ny firenena. Ahoana no fahitanao ao anatin'ny fotoana fohy ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena?
Armel NIYONGERE (AN): Eny tokoa, ny krizy ankehitriny ao Borondi dia voalohany indrindra teraka noho io fe-potoana fanintelo itondran'i Nkurunziza tsy ara-dalàna sy tsy araka ny lalàm-panorenana io izay manohintohina ireo fifanarahan'i Arusha. Nikarakara hetsika am-pilaminana ho fanoherana io fe-potoana fitondrana io ny vahoaka. Namaly izany hetsi-panoherana izany tao anatin'ny rà ny governemanta mitàna ny toeran'ny mpamoritra tamin'ny alalan'ny fahafatesan'olona maherin'ny 2 000, mpitsoa-ponenana maherin'ny 500 000 sy olona maherin'ny 8000 voasambotra noho ny tondro molotra. Fa ny tena maika, amiko, dia tokony ho hentitra ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba hanerena ny governemanta hifampiraharaha amin'ny mpanohitra hisian'ny vahaolana am-pilaminana. Raha tsy izany, mety ho tonga ny ady an-trano, na ho latsaka anatin'ny krizy lalina.
GV: Mpisolovava ianao ary mpiaro mafana fo ny zon'olombelona ao Borondi. Ankehitriny, inona avy ireo vato misakana lehibe amin'ny fiarovana ny zon'olombelona eto ary ahoana ny fomba hifandaminan'ireo fikambanana hampahafantarana sy hiampangana izay mety ho fanitsakitsahana rehetra?
AN : Amin'ny maha-mpisolovava sady mpiaro ny zon'olombelona any Borondi, tsapako fa miha-simba ny zon'olombelona. Misy ny tsimatimanota maharitra, mbola voakolikoly ary tsy tena mahaleotena ny fitsarana. Tena tsy ampy traikefa ny polisy ary voatonona matetika ao anatinà heloka bevava maro. Ankoatra izany, misy ny fisian'ny milisin'ny Imbonerakure, tanoran'ny antoko eo amin'ny fitondrana izay miseho ho ambonin'ny lalàna. Ary amin'izao fotoana izao, andalam-panakatonana sy manafoana fikambananà fiarahamonim-pirenena maro izay mavitrika amin'ny fanamelohana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny governemanta. Fa tsy misy fiantraikany amin'ny asanay ireo famoretana rehetra atao amin'ny fikambanana ireo, tokony hanova paikady aza izahay mba hanohy hanaitra izao tontolo izao amin'izay mitranga eto amin'ny firenena mba hitana ny toerany ny tsirairay.
GV: Mahita ve ianao fanombohanà fifanakalozan-kevitra iray mahasoa miaraka amin'ny mpisehatra ara-tsosialy samy hafa mikasika ny zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra?
AN : Azo lazaina ho tsy azo tanterahina ny resadresaka mahasoa ifanaovan'ny samy Borondey satria tsy manaiky hiresaka eo ambony latabatra amin'ireo izay nikarakara ny hetsi-panoherana ny governemanta. Azo marihana koa fa tsy nampiseho fahavononana hitady vahaolana azo tsapain-tànana ho an'ny krizy any Borondi, ka mety hampitarazoka ny fiverenana amin'ny fandriam-pahalemana, ny fikambanam-paritra ao amin'ny Fiarahamonina Afrikana Andrefana izay nandray an-tànana ilay raharaha.
GV: Filohan'ny ACAT-Burundi sady Talen'ny SOS-Torture ianao: Tahaka ny ahoana no fisehon'ny tontolo andro iray manoloana ny andraikitra toy izany ary ahoana no hahazoanao antoka ny fiarovana ny fianakavianao sy ny mpiara-miasa aminao?
AN: Miankina amin'ny fanoloran-tena mba hahazoana ny vokatra ny rehetra, na inona na inona mitranga. Ary miaraka amin'ny krizy ankehitriny, nampianarinay ny olona mba ho mpanara-maso izy tenany hiampanga ny fanitsakitsahana zon'olombelona. Manana mpanadihady tsy mitonona anarana eny anatin'ny fiarahamonina izahay, fa mandray vaovao avy amin'ireo olon'ny fanjakana (polisy, fitantanana, sns …) ihany koa izahay. Ezahanay ny tsy hahalalàna ireo mpiara-miasa aminay. Miasa ao anatin'ny toe-javatra tena sarotra izahay, saingy mampiasa paikady manokana tsy tapaka mba hifanaraka amin'ny ny fiovan'ny toe-draharaha misy.
GV: Inona no anjara asan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena eo amin'ny asanareo ary ahoana no fahitan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao?
AN: Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny krizin'i Borondi ny fiarahamonina iraisam-pirenena, indrindra noho ny fandraisany fanapahankevitra izay tsy nampiharina mihitsy. Mbola tohizan'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ny fanolorana tatitra mampiseho fa misy heloka nataon'ny mpiasam-panjakana, manantena zavatra mivaingana mifandraika amin'ireo tatitra naroson'ny Firenena Mikambana izahay. Tokony handray fanapahankevitra mihitsy ny Firenena Mikambana mba handefa mpitandro filaminana hiaro ny vahoaka Borondey ary hiarovana ny adim-poko, raha tsy izany dia mpiray tsikombakomba koa izy ireo
GV: Toa sarotra dia sarotra ny fifandraisan'ny Governemanta ao Burundi amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny Vondrona Afrikana. Misy fiantraikany amin'ny toe-draharaha ao amin'ny firenena ve izy io ary mahatandindonin-doza ny fikambanana toy ny anareo?
AN: Eny, tokoa. Mitera-doza ho an'ny fiainan'ny vahoaka Borondey ny fifandraisana sarotra dia sarotra misy amin'ny Governemantan'i Borondi sy ireo mpiara-miasa aminy. Izay mihitsy, izany fihenjanan'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena izany dia miteraka fiakarana ankolaka amin'ny vidin'ny sakafo fototra noho ny tsy fahampian'ny vola vahiny aterak'izany. Miteraka fahasarotana amin'ny ankapoben'ny fiainan'ny mponina ny vokatr'izany. Mba hisorohana izany, dia tsy maintsy tadiavina haingana ny vahaolana ho an'ny krizy ao Borondi.